Somaliland: Maamulka Togdheer Oo Bandoo Soo Rogay, Markay Bateen Dilalka Loo Adeegsanayo Faashka, Tooreyda Iyo Budhku - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Maamulka Togdheer Oo Bandoo Soo Rogay, Markay Bateen Dilalka Loo Adeegsanayo...
Somaliland: Maamulka Togdheer Oo Bandoo Soo Rogay, Markay Bateen Dilalka Loo Adeegsanayo Faashka, Tooreyda Iyo Budhku
Badhasaabka Gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan (Ramaax), ayaa ku dhawaaqay Hawl-gallo lagu sugayo Amniga oo Ciidammada booliisku ka bilaabayaan Magaalada Burco.
Badhasaabka ayaa sheegay inay Hawl-galkan u samaynayaan markii Bishan gudaheeda oo kaliya Magaalada Burco lagu dilay Shan Qof, kuwaasi oo dilkooda loo adeegsaday Hubka fudud, sida Toorey, Faash iyo Budh.
Guddoomiye Ramaax oo Shalay kulan la yeeshay Guddida Nabadgalyada ee Gobolka Togdheer, ayaa sheegay in wixii ka dambeeya Tobanka Habeennimo aan la ogolayn inay Gaadiidka yaryar ee Bajaajta iyo Tukhaanku ka mid yihiin ka dhex Shaqeeyaan Magaaladaasi.
Guddoomiyaha oo Arrimahaa ka hadlayaana wuxuu yidhi “Markaan Xaqiiqada ka hadlo bishaa aynu ku jirno Dhimashada Gobolka ka ka dhacday ee aan Xabbad ahayn ee Faash sababay, ee Mindi sababtay, ee Budh sababay waa Shan, dhaawucuna tiro malaha. Waxa la adeegsanayaa Hub wax dila, waa Faash, waa Soodh, Toorrey, Budhkii Maraaraha lahaa, markaa Shirkan waxaanu iskugu nimid in Arrimahaa wax laga qabto.”
Maxamuud Cali Saleebaan (Ramaax) wuxuu shaaciyey Bandoo lagu soo rogay qayb ka mid ah Gaadiidka ka dhex shaqeeya Burco, “Dhammaan Gaadiidka waa laga baadhayaaa oo Qoriga aya la mid yihiin, gaadhiga lagu qarko Faash waa laga qaadayaa, Waayo? wuxuu la mid yahay Qoriga.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray “Tobanka Habeennimo laga bilaabo, muddada ay Hawl-galladani socdaan Suuqa laguma arko karo Bajaajta, Kabta Buudhka ah (Nooc ka mid ah Gaadiidka Tukhaanka) iyo Tagaasida yaryar.”